Dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo maleeshiyada Galmudug oo mar kale ka qarxay Gaalkacyo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandDagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo maleeshiyada Galmudug oo mar kale ka qarxay Gaalkacyo
Taangi ay leeyihiin ciidamada dowlada Puntland. [Sawirka: Archive]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo maleeshiyada Galmudug ayaa maanta oo Isniin ah dib uga qarxay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Dadka deegaanka ayaa sheegaya in dhinacyada dagaalamaya ay adeegsanayaan qoryaha waa-weyn oo dhawaaqooda laga maqlayo magaalada oo dhan.
Dagaalka maanta oo Isniin ah ayaa ka bilaabmay duleedka koonfureed ee magaalada halkaas oo labada dhinac ay saldhigyo ku leeyihiin.
Ma jirto faahfaahin dhaqso ah oo ku saabsan khasaaraha.
Sabtidii, ugu yaraan 20 qof ayaa lagu dilay isku-dhacyo u dhaxeeyay labada dhinac, kuwaasoo badankood ay ahaayeen ciidamadii kala duwanaa ee dagaalamay.